PET dị mma na-ekpo ọkụ ihe nkiri mma nkpuchi China Manufacturer
Nkọwa:PET Ebe Nkiri Igwe Ihe nkiri Infrared,Ngwongwo ihe nkiri ihe nkiri infrared nke ukwuu,Nkume Mma Nkpo Ihe
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Nlekọta Ihe Ịgba Ahụike Ahụike Maka ihe nkpuchi > PET dị mma na-ekpo ọkụ ihe nkiri mma nkpuchi
PET dị mma nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ike iwepu ebe ihu, acne wdg, mee ka ị dịkwuo ma mara mma.
Igwe ikuku infrared dị mma maka nlekọta ahụike ụmụ mmadụ,
Ihe eji ekpo ọkụ dị ka na-esonụ:
1. Oghere nwere oghere; ihe dị ọkụ; akwa nke mkpa (ihe na-erughị 0.12mm).
2. Na-enweghị obi ụtọ, ụda mgbatị kachasị elu nke nanị ihe dị ka 0.8mm.
3. Ụdị na nha nke mgbanwe, nke kachasị mma maka ịme obere ihe ọkụ eletrik.
4.Ime usoro ncha oku, ikwe ka ike ikuku elu di oke. Ya mere, usoro ntanetị a na-eme ka ọkpụkpụ kpo oku dị mma karị, ọnụego ọkụ ọkụ.
5.Na mpaghara dị iche iche nke saịtị ahụ nwere ike izute ihe ndị dị mkpa dị iche iche na-ekpo ọkụ na ihe ọkụkụ dị ọkụ, dịka ihe ndị a chọrọ, iji nweta nkesa elu okpomọkụ.
Voltage ọsọ ọsọ: AC / DC24V
Nguzogide mbụ: 35.5-41.7Ω , Center nke iguzogide 38.4Ω
Ike: 15W ± 8%
akwa mgbaaka dị elu: ≥500Vac / 2mA / 2s
Mmetụta nke iwepụ ike: ≥0.5Kgf / 1min
Owuwu . Size:
2.Lead`s isi bụ UL3135 0.14 * 12, red PVC akara, ogologo nke akara bụ 60mm
3.Na 10K ihe nkiri okpomọkụ eguzogide, na 26 # UL3135 black silicone akara, ogologo nke akara bụ 60mm
Ngwaahịa : Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Nlekọta Ihe Ịgba Ahụike Ahụike Maka ihe nkpuchi
PET dị ka ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
kpochapu uzuzu ikpo oku electrothermal Kpọtụrụ ugbu a
nlekọta ahụike mask polyimide PI Kpọtụrụ ugbu a
anya nlekọta ahụ ike Farfụfụ kpo oku infrared Kpọtụrụ ugbu a
ihe nkiri na-ekpuchi ọkụ eletrik Polyimide Film Kpọtụrụ ugbu a
PET Ebe Nkiri Igwe Ihe nkiri Infrared Ngwongwo ihe nkiri ihe nkiri infrared nke ukwuu Nkume Mma Nkpo Ihe Nkiri Igwe Ihu Igwe Igwe ihe nkiri na UL Na-egwuri egwu na Infrared Igwe Ọkụ na Infrared Ihe nkiri Nkiri Ụlọ Ihe nkiri